Kulan Gabalka Afdheer ka Dhacaya Khamiista – Rasaasa News
Kulan Gabalka Afdheer ka Dhacaya Khamiista
Afder – Ogadeniya(April 23, 2009) – Maanta oo Khamiis ah waxaa magaalada Hargeelle ee caasimadda u ah gobolka Afdheer ka furmi doona shir ay yeelan doonaan dawlada dhexe ee Itobiya iyo beel saluugsan sida uu maamulku degaanku ula dhaqmo.
Shirkan ayaa dhex mari doona dowladda dhexe, dowladda deegaanka Somalida madax ka socota iyo Odayaasha gobolka Afdheer iyo galbeedka gobolka Godey.
Waxaana laggaga wada hadli doonaa ammaank gobolka Afdheer, iyo arimo dacwad ah oo ku saabsan madaxda kilalka.
Dadka aqoonta durugsan u leh kililka ayaa saadaal ka bixiyey shirka kadib qiimeyn lagu sameyn doono afdheer taas oo lagu soo gabagabeyn doono in la xidho, la ruqseeyo ama nabad-diid lagu eedeeyo kuwo hor leh.
Gobolka afdheer wuxuu ka mid yahay gobolada ay nabadu ka jirto hase yeeshee deegaankiisa iyo dadkiisaba hoggaanka nabadgeliada Kililka 5-aad ula dhaqanto sida gobolada kale ee mucaardku ka jiro iyadoo lagu eedeeyo dadkiisa nabad-diid.
Shirkan ayaa laga yaabaa in uu noqdo mid keeni kara in ay reer afdheer baddelaan go,aankii ay hore u doorteen ee ahaa nabada madaama ay ku muteysteen xadhig, cadaadis, horumar la,aan.
Afdheer kama jirto isgaarsiin ama telefoon halka dhammaan gobolada kale ee kililka ay lee yihiin isgaarsiin, magaalooyinka gobolkani ma leh biyo oon dartiis ayey dadku halis u galaan, hal isbitaal oo ku yaal ma qalabaysna loogamana faa,iideysan dadweynaha reer afdheer.
Afder waxay la wadaagtaa gabalada Somalida Ogadeeniya horumar la,aanta iyo waxayse awal ka roonayd xadhiga iyo dilka faraha badan ee saaraan gobolada oo dhan.
Tolow Xubnaha Kooxda Khaatuma-xun Xageey Cidhibsan